३ दिनमै भत्कियो ढलान सडक- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
३ दिनमै भत्कियो ढलान सडक
माघ १३, २०७६ भूषण यादव
वीरगन्ज — पर्साको कालिकामाई गाउँपालिका–२ गदियानीमा ३ दिन अगाडि ढलान गरिएको सडक भत्किएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष निकटको समितिले गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री प्रयोग गरेकाले ढलान भत्किएको स्थानीयको आरोप छ ।
स्थानीय रामबाबु साहको घरदेखि लालबाबु साहको गोठसम्मको सडक ढलान गर्न गाउँपालिकाले १० लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिएको थियो । स्थानीय भूषण ढलानको क्रममा मापदण्डबमोजिम डण्डी र सिमेन्ट प्रयोग नगरिएको दाबी गरे । साहका अनुसार गत बुधबार ढलान गर्ने क्रममै स्थानीयले विरोध गरे पनि समितिले निर्माण जारी राखेको थियो ।
स्रोतका अनुसार २० प्रतिशत कमिसनमा उपभोक्ता समितिले काम पाएकाले गुणस्तर बमोजिमको निर्माण हुन नसकेको हो । ‘योजना सम्झौता हुनुअगावै १० प्रतिशत र बाँकी १० प्रतिशत भुक्तानीको बेला दिने सहमति भएपछि योजना वितरण हुने गरेको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘कमिसनकै लागि अधिकांश टुक्रे योजना बनाइएका छन् ।’
उक्त सडक ढलानका लागि गत आर्थिक वर्षमै सडक अतिक्रमण हटाइएको थियो । घर भत्काइएको थियो । कमिसनकै लागि उक्त सडक ३ चरणमा निर्माण गर्न लागिएको स्रोतले बतायो ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहले गुनासो आउनेबित्तिकै अनुगमनमा गएको बताए । ‘४/५ मिटर ढलानमा कैफियत देखिएको छ,’ उनले भने, ‘तत्काल काम रोक्न निर्देशन दिएको छु ।’ उनका अनुसार प्राविधिक टोलीको सुझावअनुसार भत्काएर निर्माण गर्ने कि त्यसैको माथिबाट ढलान गर्ने निर्णय गरिनेछ ।
गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोगको विरोध गत महिना कालिकामाई गाउँपालिका–१ मुड्ली टोलमा निर्माणाधीन नालामा गुणस्तरहीन इँटा प्रयोग भएको पाइएपछि स्थानीयले विरोध गरे । गाउँपालिका प्राविधिकले अनुगमनपछि उक्त इँटा अस्वीकृत गरिदिए । सिक्टा नदीदेखि शिव मन्दिरसम्मको ४ सय मिटर सडक खण्डमा नाला निर्माण गर्ने योजना थियो ।
गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । गुणस्तरहीन इँटाबारे स्थानीयले गाउँपालिकामा समेत जानकारी गराएका थिए, तर सुरुमा कसैले चासो लिएनन् । विरोध नै गरेपछि गाउँपालिका कारबाही गर्न बाध्य भयो ।
उक्त योजना स्थानीय उपभोक्ताको मागविपरीत भएको खुलेको छ । ‘हाल नाला निर्माण भइरहेको स्थानमा वर्षेनि सिक्टा नदीको बाढी आउने गरेको छ,’ मुड्लीका नरेश चौरसियाले भने, ‘इँदाको सोलिँ एक पटककै बाढीले बगाएर लान्छ, इँटाको सट्टा बोल्डरको प्रयोग आवश्यक छ ।’ गाउँपालिकाका प्राविधिक मिथलेश यादवले पनि स्थानीयले बोल्डर सोलिङ माग गरेको स्वीकारे । स्थानीयको माग बमोजिम गर्न नयाँ इस्टिमेट बनाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
वास्तविक उपभोक्तासँग समन्वय नगरी योजना बनाइएकोले विरोध भएको गाउँपालिकाका एक कर्मचारीले बताए । सम्झौता पत्रमा एक नम्बर इँटा प्रयोग गर्ने सहमति भए पनि उपभोक्ता समितिले दुई नम्बर इँटा प्रयोग गरेको फेला
परेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजु साहले बताए । ‘स्थानीयको मागअनुसार नालाको सोलिङमा बोल्डर राख्ने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘गाउँपालिकाले गुणस्तरहीन निर्माणको भुक्तानी गर्दैन ।’
प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १२:५६
जोखिम मोलेर शल्यक्रिया
मुगु जिल्ला अस्पतालमा औषधि, जनशक्ति र उपकरण अभावकै बीच सेवा दिनुपर्ने बाध्यता
माघ १३, २०७६ राजबहादुर शाही
(मुगु) — छायाँनाथरारा नगरपालिका–३, फूलीकी सुकिल्ली खड्कालाई बेहोस अवस्थामै राति १२ बजे जिल्ला अस्पताल पुर्‍याइयो । बच्चाको हात बाहिर निस्किएर छटपटाउँदै गरेको अवस्थामा उनलाई अस्पताल पुर्‍याइएको थियो । उपकरणबिनै जोखिम मोलेर डा. मीना चौलागाईं र डबल मल्लले उनको शल्यक्रिया गरे ।
२०७५ कात्तिक ३० गते भएको यो शल्यक्रिया अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले सम्झिरहन्छन् । एक साताअघि अत्यधिक रक्तस्रावले थलिएकी छाइलकी अर्की गर्भवती महिलाले पनि जिल्ला अस्पतालमै सकुशल बच्चा जन्माइन् । पेटमा दुई बच्चा भएका कारण उनलाई स्थानीय स्वास्थ्यचौकीमा प्रसूति हुन समस्या भएको थियो । विगत वर्षमा महँगो रकम खर्च गरेर सुर्खेत र नेपालगन्ज जाने गर्भवती महिलाले जिल्लामै शल्यक्रिया सुविधा पाएका छन् । जिल्ला अस्पताल, ठिनीमा ३ वर्षयता शल्यक्रियामार्फत प्रसुतिसेवा उपलब्ध छ । ३ वर्षअघि बाहिर रिफर गरिएका गर्भवतीको बाटोमै ज्यान जाने जोखिम थियो । डा. चौलागाईं र मल्लले ७० दिने ‘एड्भान्स एसबीबीएस’ तालिम लिएपछि शल्यक्रिया सेवा प्रभावकारी बन्दै गएको छ ।
पर्याप्त औषधि, जनशक्ति र उपकरणको अभावबीच चिकित्सकले रातदिन सेवा दिइरहेका छन् । अस्पतालका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा चार जना र २०७५/७६ मा १३ जनाले शल्यक्रियामार्फत प्रसूतिसेवा लिएका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा ९ जना गर्भवतीको शल्यक्रिया गरिएको छ । अस्पतालले अहिलेसम्म २६ जटिल अवस्थाका गर्भवतीलाई शल्यक्रिया गरिएको जनाएको छ ।
बिरामीको अवस्थालाई ख्याल राखेर जोखिम मोलेरै भए पनि शल्यक्रिया सेवा दिइरहेको डा. चौलागाईँले बताइन् । उनका अनुसार ९ औं हका विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा अन्य बिरामीलाई शल्यक्रिया सेवा दिन भने समस्या भइरहेको छ । ‘अस्पताल पुर्‍याए पूर्वाधार र उपकरणबिनै जोखिम मोलेर शल्यक्रिया गर्ने गरेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर जिल्लामा प्रसुतिका लागि गर्भवतीलाई अस्पताल नपुर्‍याउने प्रवृत्ति बढी छ ।’ उनका अनुसार गत साता समयमै अस्पताल पुर्‍याउन नसक्दा रोवाकी धनरुपा विकको मृत्यु भएको थियो ।
जिल्लाबाट अहिलेसम्म एकजना गर्भवतीलाई मात्र बाहिर रिफर गरिएको छ । शल्यक्रिया सेवाले गर्भवतीको रिफरको दर कम हुँदै गएको डा. मल्लले जनाए । उनका अनुसार जिल्लाको ४ स्थानीय तहका प्रसुतिगृहले शल्यक्रियाका लागि गर्भवतीलाई अस्पतालमा पठाउने क्रम बढेको छ । अस्पतालमा सबैभन्दा बढी सोरु, मुगमकार्मारोङ गाउँपालिका र छायाँनाथरारा नगरपालिकाका गर्भवतीले प्रसूति सेवा लिइरहेका छन् । उनले रक्तसञ्चार केन्द्र नहुँदा शल्यक्रियामा समस्या भइरहेको गुनासो गरे । ‘रगतका लागि सुरक्षाकर्मीलाई गुहार्नुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘बिरामी बचाउन कहिलेकाहीँ स्वास्थ्यकर्मीले नै रक्तदान गर्ने गरेका छौं ।’
पूर्वाधारको अभाव भएपछि जिल्ला अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ । कोरिया सरकारको ४५ करोड रुपैयाँ सहयोगमा सुविधासम्पन्न अस्पताल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो । चालु आर्थिक वर्षभित्रै नयाँ भवनबाट उपचार सुचारु गर्ने अस्पतालको योजना छ ।
प्रकाशित : माघ १३, २०७६ १२:५३